Nezvedu - Yixing Boya Nyowani Zvinyorwa Technology Co., Ltd.
Yixing Boya Nyowani Zvinyorwa Technology Co., Ltd.
Yixing Boya Nyowani Zvinyorwa tekinoroji Co., LTD yakavambwa muna Gumiguru 2018 inyanzvi mukutsvaga, kugadzira uye kutengesa inoshanduka yakawanda-yakaturikidzana yakashongedzwa zvinoshanda zvekutakura zvinhu, Seimwe yekutungamira kugadzira muChina, Boya aive nemidziyo gumi nemashanu yekudyidzana kuti ape yakafara huwandu hwezvigadzirwa zvevatengi vedu. Zvatakasiyana nevamwe isu tinotenda kuti hunyanzvi inguva yemberi yekambani, Saka takashanda pamwe neXiBei Industry University uye tinokoka boka revanhu vane Philosophy Degree mu macromolecule makuru kuti vatsvage pamwe needu makore makumi maviri ane ruzivo injinjini pane nyowani yekupakata zvinhu.
Kuti ubate zvakananga nechikafu, hapana chinhu chakakosha kupfuura kuchengetedzeka kwechikafu.
Neyechitatu bato yekutarisa pane yedu shopu takawana FDA, BPA YEMAHARA, BRC …….
Haufanire kubhadhara yakawanda kuti uwane zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, MuBoya nyanzvi gadzira maitiro ekuderedza mutengo .Mutengo wakaderera, zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zviri pano!
Isu tinotenda kuti kungovandudza chete kunogona kuita purofiti .Dhipatimendi redu reR & D rine anopfuura makumi maviri emakore ruzivo pamwe chete neboka revanhu vane Philosophy Degree mu macromolecule makuru ekushanda pakutsvagisa kwezvinhu zvitsva zvekupakisha.
Seimwe yezvigadzirwa zvinotungamira zvekutakura zvekudya, kuchengetedzeka ndiko kwakanyanya kukosha kune wese munhu .Boya anoteerera zvakanyanya pairi.
Vashandi vese muBoya vanoongororwa hutano mwedzi wega wega. Uye kune vashandi vatsva vanozobvuma kudzidziswa kwemwedzi kwehunyanzvi vasati vatanga kunyatso shanda.
Sarudzo yezvinhu zvakasvibirira, isu tashanda neBASF, ExxonMobil yezvinhu zvakasvibirira, Batch yega yega inoedzwawo neyedu ane ruzivo rweR & D maneja isati yasaina.
Guruva remahara shopu shopu, vashandi vese vanopfeka jira rebasa rakafanana, neheti yakakosha. Nguva dzese apo vashanyi pavanopinda mumusangano wedu vanofanirwa kutora chifukidzo chehombodo uye ngowani vobva vapfuura nemumhepo yekugeza.
Kunze kwezvese zvemukati zvakanyatso kudzora systerm, isu takakokawo mumwe wechitatu kuti aongorore pabasa redu, pazasi pane chitupa chatinowana kubva kune wechitatu kuratidza kuti zvigadzirwa zvese zvakachengeteka chikafu uye zvinogona kubata nechikafu zvakananga.
Isu hatisi chete tinogadzira yakasimba, yemhando yepamusoro chikafu chekutakura zvinhu asi zvakare inopa matsva ekupakira mhinduro. Kana iwe uchitsvaga zvigadzirwa zvine mutengo wemakwikwi ndapota titumire email, KuBoya zvishandiso zvese zvinongogadzira chigadzirwa chimwe chete hapana shanduko tine kana imwe tsvina, iwe unowana zvinopfuura zvaunoda! Mumakore mashoma apfuura isu takatumira kunze kunyika makumi mashanu neshanu, ine chitupa chakazara cheEU, FDA uye BRC, ISO.
Boya vanoedza kuita zvirinani zvigadzirwa zvedu uye nekushandira kuzvipira kwedu kune vatengi vedu. Tine zvimwe zvauri kutsvaga, kwete chete chigadzirwa uye sevhisi, isu tinotakura chivimbiso kuvimba uye kuchengetedzeka.